भोलिदेखि के खुल्ने, के नखुल्ने ? पसल पनि बार अनुसार खुल्ने, हेर्नुहोस् सूची – MeroAkhabar
भोलिदेखि के खुल्ने, के नखुल्ने ? पसल पनि बार अनुसार खुल्ने, हेर्नुहोस् सूची
in Corona Virus, उपकरणहरु, जीवनशैली, परिवार, फोटोग्राफी, यात्रा, समाचार, स्वास्थ्य
पसल पनि समय निर्धारण गरेर सञ्चालन गर्ने दिइने भएको छ । कार्यालय र व्यवसाय पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने भदौ ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी रहने भएको छ ।